Amazing 2 B / R Townhouse kufutshane elunxwemeni-Kato Paphos - I-Airbnb
Amazing 2 B / R Townhouse kufutshane elunxwemeni-Kato Paphos
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguPolynikis
Phila ngokufanelekileyo kwisitayile, kwaye ukonwabele ukuhlala ungalibalekiyo ePafos kwi "The seven" ... Indlu yanamhlanje, ehonjiswe ngokutsha 2 B \_ igumbi (imigangatho emi-2) Idolophu enendawo yokupaka yabucala, ipatio, ikufutshane kakhulu: eyona iflegi kamasipala yasePaphos eblue elunxwemeni malunga. 200m, imarike encinci, ikhemesti, kunye neendawo zokutyela. Isikhululo sebhasi sikumgama nje oyi-300m. Kumgama nje omfutshane wokuya kwizibuko elihle lasePaphos elineevenkile, iicafe, iibhari kunye neetavernas. Indawo entle kakhulu. Yonwabela uhambo lokuphumla kunxweme olumangalisayo lweMeditera kwindlela entsha ye-2km yokuhamba!
Amagumbi eNdlu-Izinto eziluncedo / iZibonelelo / iMithetho:
-Umgangatho osezantsi: Ucango lokungena kunye nocango olukhulu lwecala lokutyibilika olukhokelela kwindlela enkulu yokuqhuba enendawo yokupaka. Ucango lwangasemva ekhitshini luvuleleka kwipatio enkulu yabucala.
* Igumbi lokuhlala lahlulwe kwikhitshi elinendawo yomlilo kunye nezinyuko ezimbini ezima phakathi kwezi zithuba zimbini. Ukongeza, indawo yokuhlala kweli khaya icwangcisiwe ukuze kugxilwe kumabonwakude kwaye kude nemibono ethe ngqo yekhitshi.
*Isofa yezihlalo ezi-2 enye, enye i-sofa ye-3 ene-armchair enye, itafile yekofu enkulu kunye netafile encinci yecala.
* Itafile enye yokutyela yangaphandle kunye nezitulo ezi-4 kwipatio yabucala / yangasemva.
-Phezulu / kuMgangatho wokuqala: Imaisonette inebalcony (ucango olutyibilikayo) kwigumbi lokulala loku-1, ifestile enye kwigumbi lokulala lesi-2 kunye nefestile ethambekileyo kwigumbi lokuhlambela.
• Igumbi lokulala eli-1 elinebalcony- lihlala abantu ababini kwibhedi yabantu ababini (160 cm x 200cm)
Igumbi lokulala eli-2 elinefestile- lihlala abantu aba-2 kwiibhedi ezimbini ezingatshatanga. (90cm × 200cm)
* I-air conditioning / ukufudumeza kuyafumaneka kuwo omabini amagumbi okulala kunye negumbi lokuhlala.
-I-sanitizer yesandla / i-antibacterial / antibacterial
-Ukucoca ulwelo kunye ne-disinfectants yendlu zikhoyo, zigcinwe kwenye yeekhabhinethi zasekhitshini. Umqulu wephepha lasekhitshini nawo uyafumaneka. Zive ukhululekile ukuzisebenzisa. Silandela inkqubo yokucoca i-airbnb kunye nococeko.
-Ibhedi entsha yelinena kunye neTowels zifumaneka kuphela xa ufika.
- Iphepha langasese, isepha yolwelo ngesandla, ijeli yeshawa kunye neshampu ziyafumaneka kubusuku bokuqala
-I-air conditioning / ukufudumeza kwigumbi lokuhlala kunye namagumbi okulala.
- Itafile enye yokutyela enezitulo ezi-4 ekhitshini
- Umpheki nge oveni
- Isixhobo sokufunxa umsi ekhitshini
-Ifriji / isikhenkcisi
-Umatshini wekofu weNespresso
(yeNespresso okanye iNespresso
-Izitya / izitya / iiglasi / iikomityi
- Intsimbi kunye nebhodi yoku-ayina
- Ingubo yomlilo
-Ikit yokunceda kumenzakalo
* AKUKHO Lift ekhoyo
* Indlu AYIFANELEKILEYO abantu abaKhubazekileyo okanye abantu abanokuhamba okuMiselweyo - Kukho izinyuko kumgangatho osezantsi ukuya kumgangatho ongaphezulu apho amagumbi okulala kunye negumbi lokuhlambela akhoyo.
* Umbane kunye namanzi simahla
* Ibhaskithi yokufumana imbeko xa ufika (umxholo unokwahluka)
*Ngena emva kwe-15.00 hrs / Isitshixo kwibhokisi yokutshixa
* Jonga nge-11.00 hrs / Isitshixo kwibhokisi yokutshixa
Indlu yedolophu ebanzi yanamhlanje kunye nesandula ukuhonjiswa kwindawo entle esembindini nefanelekileyo. Hamba ecaleni kwendlela yonxweme okanye uye kuqubha kwangoko kunye nekofu. Isondele kakhulu!
- Nceda ungahlali nempahla yokuqubha emanzi kunye nezinto zokuthambisa zelanga kwifanitshala yegumbi lokuhlala.
-Njengokuba nabanye abantu behlala kule ndawo, nceda uphephe umculo ongxolayo okanye ingxolo.
- Ukuthatha emva kwakho kwiindawo eziqhelekileyo kubalulekile.
- Susa inkunkuma kwaye ufake kwiingxowa zeplastiki emgqomeni ngaphandle.
- Yiba nobubele ngokwaneleyo ukucoca zonke izixhobo zasekhitshini emva kokuzisebenzisa.
- Emva kokuhlamba izitya kunye nezinye izinto zasekhitshini nceda zomise phambi kokuba uzibeke ekhabhathini okanye kwiidrowa.
- Akukho kutya kumagumbi okulala.
- Ngokuqinisekileyo AKUKHO iindwendwe ezingabhaliswanga ngaphandle kwemvume yangaphambili.
-Absolutely AKUKHO ziyobisi zalo naluphi na uhlobo.
- AKUKHO kutshaya endlwini kwaye ukuba uyatshaya ngaphandle, nceda ube nembeko kwaye ucoce iimpundu / uthuthu lwakho. Ngezizathu zokhuseleko nceda uqiniseke ukuba awuzilahli iisigarethi ezingacinywanga/iisiga kwimigqomo yendlu.
- Akukho zilwanyana zasekhaya zivumelekileyo.
-Ngalo lonke ixesha UPHUMA endlwini nceda utshixe:
a) Umgangatho ophantsi - ucango oluphambili lokungena, ucango lwebalcony, kunye nefestile yasekhitshini yangasemva kunye nomnyango kunye
b) Umgangatho ophezulu - umnyango webalcony kunye neefestile kumagumbi okulala kunye negumbi lokuhlambela.
- EZINGABUYISWAYO / okanye izitshixo zendlu ezilahlekileyo ziya kuhlawuliswa i-40 yentlawulo yokutshintsha.
-Ukusetyenziswa kwendawo yomlilo ngezizathu zokhuseleko AKUVUMELEKANGA (itshimini ivaliwe)
4.92 · Izimvo eziyi-53
Indlu isondele kakhulu kolona lwandle lubalaseleyo lukamasipala lwasePaphos, kunye nechweba lasePaphos elineendawo zokutyela kunye neevenkile ezinkulu ezikufutshane. Ungahamba yonke indawo ngokulula nangokukhuselekileyo njengoko le ndlu ibekwe kwindawo ephakathi kodwa ezolileyo nabantu bendawo abahlala kuyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Polynikis
Unxibelelwano lukhethwa kusetyenziswa imiyalezo ye-airbnb.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Paphos